गंगा चौधरी: देउवा देश बेच्न मरिहत्ते गरेका छन्, भत्ता पचाउन बाहेक संसदको के काम छ ?
एनसीएलको अर्बौ कर नउठाउने, भएको खोलानाला,उद्योगहरु बेचेर देशलाई परनिर्भर बनाएर देशलाई क्रिडास्थल बनाउन खोजेको
पुस २१, २०७८ ३:४२
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमाले केन्द्रिय सदस्य गंगा चौधरीले शेरशहादुर देउवा परीवार र आसेपासेका मात्रै प्रधानमन्त्री भएको बताएकी छन् । अहिले सम्म पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवा कुनै पनि कार्यकालमा जनताको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको बताएकी हुन् ।
सुनौलो नेपाल सगँ कुराकानी गर्दै नेतृ चौधरीले एनसिएलको अर्बौ रुपैँया कर उठाउन छोडेर देउवा सरकार देउवा खाली देश बेच्न मरीहत्ते गरेको पनि आरोप लगाएकी छन् । “एनसीएलको अर्बौ कर नउठाउने, भएको खोलानाला,उद्योगहरु बेचेर देशलाई परनिर्भर बनाएर देशलाई क्रिडास्थल बनाउन खोजेको?” उनले भनिन ।
एमाले अध्यक्ष कपी शर्मा ओलीलाई अयोग्य भनेको प्रति रुष्ट हुदै नेतृ चोधरीले भनिन्– “नेपालमा सुरुङमार्ग भित्राउनु,धरहरा बनाउनु, ठाउँठाउँमा बाटोहरु बनाउनु, अन्तराष्ट्रिय स्तरको एयरपोर्ट बनाउनु के यसैलाई अयोग्यता भन्छन ?”
एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति पनि रुष्ट देखिएकी चौधरीले उनिहरु भारतिय रैति भएको आरोप लगाएकी छन् ।
“माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड भारतिय एजेण्ड हुन यदि उनिहरु भारतिय एजेण्ड नभैदिएको भए केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिनुपर्देनथ्यो ।”
भ्रष्टाचारीको कुनै जात अनि पार्टी नहुने बताएकी चौधरीले ७० करोड भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनेहरु आज आफै सत्तामा हुदाँ कारवाही गर्न किन नसकेको भनि प्रश्न गरीन । “गोकुल वास्कोटालाई ७० करोड भ्रष्टाचार आरोपको भिल्ला भिराउन्े कांग्रेस अहिले आफै सत्तामा हुदाँ कारवाही गर्न किन सकेन ? जति वेला पनि ७० करोड ७० करोड मात्रै किन भन्छ ? भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने कारावाही गरोन नत“
प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेकी चौधरीले प्रतिपक्ष रहेकाले नेकपा एमालेले एमसीसीको विरोध गरेर ससंद अवरोध गरेको आरोपको खण्डन गर्दै भत्ता पचाउने बाहेक संसदको केही काम नभएको समेत जिकिर गरिन ।